Features | Radio Himilo | Page 5
Dhalin-yarada – Kheyraadka lagu taabba-geliyo ilbaxnimada Umadaha.
radio himilo November 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 33 Views
Muqdisho – Heerka bacriminta ama dhalmada waa aas-aaska gunta ah ee mujtamaca. Sanadkii 1947-kii laba sano kadib dagaalkii labaad ee adduunka, haweeneyda Japan waxay dhali jirtay 4.7 carruur ah. Bilowgii qarnigan tiradaas waxay isku soo dhintay si hooseysa halkaas oo ...
Muuqaal laga duubay Muslim ku tukanaya dhinaca waddada oo ku baahay internet-ka.
radio himilo November 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 45 Views
Muqdisho – Muuqaal fiidiyow ah oo muujinaya nin Muslim ah oo ku tukanaya dhinaca waddada gasha xeebta Sydney ayaa ku baahay baraha bulshada. Isaga oo Daily Mail kala hadlayay muuqaalka, madax-weyne ku-xigeenka Golaha Islaamiga ee Victoria, Adel Salman wuxuu yiri; ...
La kulan – Nin Muslimay isaga oo jirkiisa oo dhan wada shaabadaysan.
radio himilo November 26, 2017	Features, Wararka Leave a comment 48 Views
Muqdisho – Murugyahan shaabadaysan: leh gar weyn ma ahan nuuca Muslim uu qofku ka filan karo inuu kula kulmo masjidka. Hayeeshe Robbie Maestracci, burcad-hore kaas oo hadda xubin ka ah ururka horumarinta dhalinyarada ee Masjidka Holland Park Mosque ayaa sidaas ...
Turkiga oo sameynaya Hey’ad caalami ah oo wax-soo-saar Xalaal u gaar ah!
radio himilo November 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 59 Views
Muqdisho – Wasiirka Dhaqaalaha Turkiga ayaa maalintii Khamiista ku dhawaaqay in dowladdiisu ay qorsheysay furitaanka hey’addii ugu horreysay ee shati u heysata cunnooyinka xalaasha ah si loo xoojiyo heerka ugu sarreeya nolosha 1.8 bilyan oo Muslimiinta dunida ku nool ah. ...
25 Nov – Maalinta Caalamiga ee Ciribtirka Rabshadaha ka-dhanka-ah Haweenka.
radio himilo November 25, 2017	Features, Wararka Leave a comment 49 Views
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee cirib-tirka rabshadaha ka-dhanka ah haweenka waa waxaa loo dabaal-degaa 25 Nov sanad kasta si la iskugu baraarujiyo dhibaatooyinka heysta dumwarweynaha adduunka iyo dadaallada loogu raadinayo helidda samata-bax iyo negaadi nololeed oo huban. Taariikh ahaan, maalintan ...
21 Nov – Maalinta Caalamiga ee Telefishanka.
radio himilo November 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 63 Views
Muqdisho – Garwaaqsiga saameynta kordhaysa oo fogaan-aragyadu ku leeyihiin go’aan gaarista iyo jiheynta dareen weynaha caalamka ee ku foolan xasaradaha, nabadda iyo amniga iyo sidoo kale doorka ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, Kal-fadhiga Guud ee QM ayaa 21 ...
Sheekada Mohamed Bzeek – Xanaaneeyaha Carruurta laga quustay noloshooda!
radio himilo November 20, 2017	Features, Wararka Leave a comment 81 Views
California – Mohamed Bzeek, oo ah 62-jir Muslim ah oo ku nool California ayaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay wuxuu waqtigiisa ku bixiyay xanaanada carruurta maskaxda ka xanuunsan kuwaas oo laga dayacay daryeelkii ay ku lahaayeen habka xanaaneynta – isaga ...
Maqaayad qarash cuntadeeda lagu bixiyo qashinka bedelkii lacagta!
Muqdisho – Maqaayad aan caadi ahayn oo ku taalla Semarang, dalka Induniisiya waxay ku jirtaa howl-gal ay dadka xaafadda oo faqrigu la fadhiistay ku caawinayso – kuwaas oo badigood lacag dhan 25$ bishiiba ku shaqeeya – iyada oo siinaysa hab ...
Sababta aan Saaxiibo ugu baahannahay!
radio himilo November 19, 2017	Features, Wararka Leave a comment 67 Views
Muqdisho – Mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan balse si liidata looga fahmay xerada cilmiga kasmo-nafeedka waa doorka saaxiibadu ku leeyihiin nolosheenna. Wax iska caadi ayay u muuqataa inaan si qoto dheer loo qaadaa-dhigin ahmiyadda saaxiibadu noogu fadhiyaan. Dhinac kasta ...
19 November – Maalinta Caalamiga ee Suuliga ama Musqusha.
radio himilo November 19, 2017	Features, Wararka Leave a comment 57 Views
Muqdisho – Taniyo sanadkii 2013-ka, QM ayaa 19-ka November sanad kasta u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Suuliga ama Musqusha si loo asteeyo baraaruga caalamiga ah ee la xiriira muhiimadda helitaan ee musqulo iyo doorkooda la xiriira nadaafadda iyo caafimaadka adduun-weynaha. ...